पीसीको लागि एलेक्सा अनुप्रयोग - विन्डोज १० मा कसरी प्रयोग गर्ने? - कसरी
स्मार्ट डिजिटल सहायकहरूको सुविधा एक प्रकारको हो। यस स्पेक्ट्रममा असंख्य विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जस्तै सिरी, कर्टाना, गुगल सहायक, र अलेक्सा। यद्यपि, अमेजनको एलेक्सा निस्सन्देह एक विश्व स्तरीय आवाज सहायक को रूप मा यसको आलाको स्थापित गरेको छ।
त्यसकारण, अमेजनले तपाइँलाई पीसीको लागि एलेक्सा अनुप्रयोग ल्याउन लगानी गरेको छ। त्यो सहि छ! तपाईंको मनपर्ने एलेक्सा अनुप्रयोग पीसी को लागी उपलब्ध छ तपाईंको कम्प्युटरमा स्मार्ट सहायक को सुविधा को लागी।
पीसी प्रस्तावमा अलेक्सा अनुप्रयोग के गर्छ?
यो अमेजनको इको डट लाइनअप जस्तै काम गर्दछ। अर्को शब्दहरूमा, एलेक्साले तपाईंलाई सहायकले केहि गर्न अनुमति दिन्छ, तर पीसीको लागि। यसले तपाईंलाई इन्टरनेट ब्राउज गर्न, अलार्महरू वा रिमाइन्डरहरू सेट गर्न, अनलाईन शप गर्न र अझ धेरै अनुमति दिन्छ। एलेक्साले तपाइँको आदेशहरू कुशलतापूर्वक दर्ता गर्न र तपाइँलाई उही सुविधा ल्याउन सक्छ।
पीसीमा एलेक्सा अन्य कुनै पनि अलेक्सा-समर्थित निर्णय जस्तै समान काम गर्दछ। यसैले, यदि तपाइँ आवश्यक पर्दछ भने सम्पूर्ण स्मार्ट होम सिस्टमलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू, स्पोटिफाई, र पाण्डोरा जस्ता केही अनुप्रयोगहरू हालै पीसीएसीका लागि एलेक्सा द्वारा पहुँच योग्य छैनन्। जे होस्, कम्पनी अद्यावधिक मा काम गर्दैछ तपाईंलाई यी आराम प्रदान गर्न।
पीसी को लागी एलेक्सा अनुप्रयोग को आदेश संग समान लचिलोपन छ। तसर्थ, तपाईं बिभिन्न आदेशहरू जस्तै मौसम जाँच गर्न, एक मजाक प्राप्त गर्न, र अधिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंसँग एक सही ह्यान्ड्स-फ्रि उपकरण जस्तै तपाईंको पीसीको पूर्ण विकसित नियन्त्रण छ। अलेक्साको अनुकूलता र सहजता साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ।
यद्यपि एलेक्साले विन्डोज पीसीमा के गर्न सक्दछ भन्नेमा केहि सीमितताहरू छन्। यसले विन्डोज १० मा पूर्ण नियन्त्रण समर्थन गर्दैन। यसैले, यदि तपाइँ पीसी-विशिष्ट कार्यहरू शुरू गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई म्यानुअल तरिकाले गर्नुपर्नेछ। यो एक महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध हो। सायद माइक्रोसफ्ट चाहान्छ कि उनीहरूको कोर्ताना उनीहरूको गएको होस्। तर्क अस्पष्ट छ। त्यसोभए, जब तपाईं एलेक्साको साथ सहज हुनुहुन्छ, यो अझै बिस्तारै सीमित छ।
तपाइँलाई पीसीमा अलेक्सा अनुप्रयोग प्रयोगको लागि के चाहिन्छ?
पहिले तपाईलाई विन्डोज १० र माइक्रोफोनको साथ पीसी चाहिन्छ। अंतर्निहित माइकले उत्तम कार्य गर्दछ, तर त्यो आवश्यक छैन। सबै पछि, तपाईं अलेक्साको ह्यान्ड्स-फ्रि अनुभवको लागि भ्वाईस आदेशहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को, तपाईंलाई एलेक्साको साथ कनेक्ट हुनका लागि सक्रिय इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। इन्टरनेट जडान बिना, अलेक्साले काम गर्ने छैन।
सुधारात्मक रूपमा, अलेक्सा IOS वा म्याक ल्यापटपहरूको लागि उपलब्ध छैन। यसैले, यदि तपाईंसँग विन्डोज १० छैन भने, तपाईं आफ्नो पीसीमा एलेक्सा चलाउन सक्नुहुन्न। म्याकसँग एलेक्साको लागि कुनै समर्थन छैन। यदि तपाईं म्याकको लागि एलेक्सा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ अझै कुनै विकल्प उपलब्ध छैन।
तपाईंलाई पनि लग-इन गर्न र अलेक्सासँग कार्य गर्न अमेजन आईडी चाहिन्छ। अमेजन आईडी बिना, एलेक्सा काम गर्दैन। तपाईं या त दर्ता वा तपाईं पहिले नै भएको आईडी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको स्मार्ट घर प्रणाली एक दूसरे को जडान को लागी चाहानुहुन्छ, तपाईले अन्य उपकरणहरुमा प्रयोग गरिरहनु भएको ID प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
पीसी को लागी एलेक्सा अनुप्रयोग - डाउनलोड र स्थापना चरणहरु
एलेक्सा सेट अप गर्न, पहिले तपाईले यसलाई स्थापना गर्नु पर्छ। आधिकारिक माईक्रोसफ्ट स्टोर मा जानुहोस्, कुनै अन्य वेबसाइट को उपयोग नगर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाइँलाई Windows 10 कम्तिमा र एलेक्सा प्रयोग गर्नको लागि माइक्रो-इन माइक चाहिन्छ।
तपाईं एलेक्साको लागि माइक्रोसफ्ट स्टोरको खोज बारबाट खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। एकचोटि डाउनलोड भएपछि, तपाईं पीसीमा अन्य कुनै पनि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्ने मानक प्रक्रिया अनुसरण गरेर अलेक्सा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
स्थापना पछि अनुप्रयोग सुरूवात गर्नुहोस्। अब, तपाइँलाई एक अमेजन आईडी चाहिन्छ र प्रमाणहरू राख्नु पर्छ। एकचोटि तपाई पासवर्ड र लगइन गरेर सक्नुहुनेछ, यो एलेक्साबाट शुरू हुनेछ।
नियम र सर्तहरू पढ्नुहोस् ताकि तपाईं आफैंमा के पस्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ।
अनुप्रयोगले तपाइँलाई माइक र अन्य अनुमति सक्षम गर्न सोध्नेछ, तपाइँको आवश्यक्ता अनुसार तिनीहरूलाई अनुमति दिनुहोस्।
कन्फिगरेसनको बखत, यसले तपाईंलाई ह्यान्ड्स-फ्रि वा पुश-टु-टक मोडको लागि सोध्नेछ। ह्यान्ड्स-फ्रिले माइकलाई सँधै सक्रिय राख्दछ, र तपाईं भ्वाइस सहायक सुरु गर्न 'हे अलेक्सा' जस्ता आदेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा गर्न पुश गर्न तपाईंले पीसीको आदेश पुश गरेर र यसलाई प्रयोग गरेर अलेक्सा सक्रिय गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाइँले स्थापना गर्न, सेटअप गर्न, र सक्रिय गर्न एलेक्सालाई लिने सबै यही हो। जे होस्, तपाईंले पृष्ठभूमिमा अलेक्सा अनुप्रयोग सक्रिय राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले पुश-टु-टक छनौट गर्नु भएको छ भने, तपाईं जहिले पनि मनपरेको जहिले पनि ह्यान्ड्स-फ्रि सेटिंग्समा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
१ क्यू के तपाईं पीसीको लागि एलेक्सा अनुप्रयोगमा कल गर्न सक्नुहुन्छ?
बर्ष:तपाईं पीसीको लागि एलेक्सामा कल गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि तपाईले इको उपकरण किन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई कलहरू गर्न सक्षम गर्दछ। त्यो एक मात्र विकल्प उपलब्ध छ। तपाईले एको स्पिकरहरू थप्नको लागि आफ्नो पीसी साथ कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाल, भिडियो वा भ्वाइस कल गर्न कुनै विकल्प छैन। त्यहाँ एक विशेष सीमितता छ कि एलेक्सा तपाईको पीसीमा के गर्न सक्दछ।
२Q के अलेक्सा पीसीको लागि प्रणालीलाई शक्ति दिन सक्छ?
बर्ष:यदि तपाईंसँग पूर्ण रूपमा शट-डाउन प्रणाली छ भने, अलेक्सा यो फेरि सत्तामा सक्षम हुनेछैन। यो कुनै पनि उपकरणको शक्ति बन्द गर्न मिल्दो छ। यसैले, उपकरणमा एलेक्सा तपाईंलाई सुन्न लाग्नेछैन। जहाँसम्म, यदि तपाइँको पीसी एक लगातार बिजली आपूर्ति को साथ स्लीप मोड मा छ, तपाइँले आफ्नो पीसी ब्यूँझाउन र यसलाई प्रयोग गर्न अलेक्सा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई टाइप गर्न पासवर्ड दिन सक्नुहुनेछ र यसलाई आफ्नो भ्वाइसको साथ सक्रिय गर्न।
3Q। Cortana ओवर एलेक्सा किन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
बर्ष:केही व्यक्तिले अलेक्साको सुविधा र स्मार्ट होम प्रणाली भर यसको कनेक्टिविटी मनपराउँदछन्। यदि तपाईंसँग धेरै स्मार्ट घरेलु उपकरणहरू छन् जस्तै प्रशंसकहरू, बत्तीहरू, र इको, तपाईं आफ्नो पीसी यो नेटवर्कसँग जोड्न चाहानुहुन्छ। त्यो त्यहाँ अलेक्सा Cortana भन्दा अधिक मूल्यवान सम्पत्ति को रूप मा प्रमाणित गर्न सक्छ। अवश्य पनि, Cortana अझै सिक्दै छ, र अलेक्सा एक कुशल आवाज सहायक साबित भएको छ। केहि व्यक्ति अन्य कुनै पनि सहायक मा अलेक्सा मन पर्छ।
पीसीको लागि एलेक्सा अनुप्रयोग सेटअप गर्न तपाईंलाई यत्ति आवश्यक छ। यो निस्सन्देह सुविधाजनक हो तर राम्रोसँग राम्रो अनुप्रयोग होईन। पुरानो संस्करणहरूको लागि अलेक्सा हुनेछ वा म्याक छलफल गर्न अलि असम्भव देखिन्छ। आशा छ, यो गाइडले तपाईलाई चाहानु भएको सबै प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
याद गर्नुहोस्, पीसीको लागि एलेक्सा एक स्मार्ट सहायक हो जसले केहि काम गर्दछ। जहाँसम्म, तपाईंले अझै पीसी-उन्मुख कार्यहरूका लागि मैन्युअल्ली काम गर्नुपर्नेछ। Cortana ले त्यहाँ समर्थन गर्न सक्दैन! यति नै!
टिभी कार्यक्रमहरू र फिल्महरू नि: शुल्क अनलाइन हेर्नुहोस्
कहाँ आईफोन हेडफोन किन्न
www हेर्ने चलचित्र लिंक नेट
चलचित्रहरूका लागि नि: शुल्क स्ट्रिमिंग साइटहरू
कसरी फिर्ती प्राप्त गर्न स्टीम